Isniinta - Sabti 7:00 AM ilaa 9:00 AM
Dib-u-habeynta fikradaha, iftiiminta fikradaha, kor u qaadka firfircoonida iyo raadinta horumarka
Sebtember 16-17, Yantai Shougang Dongxing Group Co., Ltd. waxay qabatay shir kadiri ah si “loo hirgeliyo ruuxda Shougang ee” saddexda hal-abuurnimo “shir”. Wadar dhan 67 hogaamiye kooxeed, fuliyaal sare iyo kaadir heer dhexe ah oo ka socda cutubyada maalgashiga dibada ee grou ...
Codsiga birta tungsten
Tungsten steel waxaa iska leh carbide sibidh ah, sidoo kale loo yaqaan daawaha tungsten titanium. Adaggu wuxuu gaari karaa 89 ~ 95hra. Sidaas darteed, alaabada birta ah ee tungsten (saacadaha birta ah ee tungsten) ma sahlana in la xidho, oo adag oo aan ka baqayn in lagu daro, laakiin waa jajaban. Carbide sibidhka ayaa inta badan ka kooban ...
U beddel fikirka si aad u iftiimiso fekerku wuxuu xoojiyaa firfircoonida raadinta horumarka
Sebtember 16-17, Yantai Shougang Dongxing Group Co., Ltd. waxay qabatay “hirgelinta Shougang 'sanchuang' ruuxii kulanka” kaadiriin shir. 67 qof ayaa kaqeybgalay kulanka, oo ay kujiraan hogaamiyaasha kooxda, howl wadeeno sarsare oo ay kooxda dirtay dibada i ...
Shirkaddu waxay qabatay kulanka abaabulka "dhimista kharashka iyo waxtarka"
Subaxnimadii Oktoobar 20, shirkaddu waxay ku qabatay shir abaabul xarunta waxqabadka shaqaalaha si ay u fuliso waxqabadka “dhimista kharashka iyo waxtarka”. 240 kaadir iyo shaqaale ka socda 13 cutub oo shirkadda ka mid ah ayaa ka qaybgalay kulanka, iyo “dhimista kharashka iyo ...
18 waxyaabood oo shaqaalaha wanaagsan lahaan karo
1. Samee keydka dukumiintiyada iyo feylasha muhiimka ah Xirfadiisa, qaar caado u muuqata oo yar ayaa dadka qaar ka dhigeysa kuwa kale kuwo wanaagsan, runtiina, maadaama shaqaale fiican uusan kaliya ka imaanin kan wanaagsan laftiisa, sidoo kale kuma jiro IQ sare iyo mid hoose, eq, inbadan kuma xirna xirfadahooda bulsheed, waxaana ka sii muhiimsan f ...
Rullaluistemadka Tungsten Carbide, Tungsten Carbide Roller Ring, Qaybta Mashiinka, Roll Carbide Cemented, Wareegyada Roll Mill, Duub Tungsten Carbide,